Sababta ay laf cad toobin ugu hayaan Xildhibaannada doonaya in loo codeeyo 13-ka xubnood ee Gobolka Banaadir (Meesha ay ku siran yihiin?) | Hadalsame Media
Home Wararka Sababta ay laf cad toobin ugu hayaan Xildhibaannada doonaya in loo codeeyo...
(Muqdisho) 26 Sebt 2020 – Waxaan helaynaa xog sheegaysa in ay jiraan xildhibaanno xalay kulan yeeshay kuwaasoo ka wada hadlay 13-ka xubnood ee lasoo hindisey in Aqalka Sare laga siiyo Gobolka Banaadir, taasoo laakiin laga saaray heshiiskii siyaasadeed ee ay DF iyo maamulladu ay gaareen 17-kii bishan.
Waxaa la sheegayaa in kulankii xalaytoole oo ahaa casho sharaf uu Xildhibaannada u sameeyey Guddoonka Gobolka, Md Cumar Filish, ayaa looga hadlay sababta heshiiska siyaasadeed looga reebay 13-kan kursi, si maanta loogu daro cod u qaadista baarlamanka.
Yeelkeede, xaaladda 13-kan kursi ayaan u kala caddayn sida ay dadku moodayaan, sababtuna waxay tahay in waloow uu Guddoonka Baaralamanka Md Mursal uu ka mid ahaa dadkii u doodayey aanu MW Farmaajo u dirin markii la ansixiyey si loo saxiixo, balse uu taa biddaalkeeda u diray guddi farsamo oo dhanka garsoorka ah, taasoo ka dhigan in aanu weli joogin marxalad codayneed.
Waxaa intaa dheer oo sii dilaysa inaan lagusoo darin heshiiska siyaasadeed ee qamar-shiidka ah oo ay la jirto in aan si ku filan loogu ololayn oo looga haray halkii la dhigay maalintii uu Baarlamanku u codeeyey, taasoo iyaduna sii fogaynaysa fursad uu ku meel maro.
Sidaa darteed, Xildhibaan kasta oo ku fikiraya in 13-kaa xubnood maanta loogu codeeyo Baarlamanka dhexe waa qof bacaad qooryo sagaaro ku haya oo ku siran ruwaayad la dhigay.
Previous articleGuuleed Yare oo ugu dambayn Turkiga u dhoofay & deeq waxbarasho oo dhanka Injineeriyadda ah oo la siinayo + Sawirro
Next articleDalalka Midowga Yurub oo isku khilaafsan waxa laga yeelayo qaxootiga Giriigga (Dalal ogolaaday inay qaar ka qaataan & magacyadooda)